IT Manager/ Technician for Global Grand Group of Companies | Job in Myanmar
Jobs in Myanmar, jobs in Yangon - IT/Computing Jobs - IT Manager/ Technician
•	IT နှင့် ပတ်သက်သည့် System and Net-working ပိုင်းကို ကျွမ်းကျင်စွာသိနားလည်သူ။
•	POS (Point of Sale System) and ERP (Enterprise Resource Planning) System ပိုင်းကိုကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနုိင်သူ။
•	တက္ကသိုလ်တခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီသူ (Computer Certificate များရရှိထားသူ ဦးစားပေးမည်။
•	အသက် (၂၅) နှစ် မှ (၄၀)နှစ်အတွင်းရှိသူဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅)နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူ။
•	Male (5) Post
No.70-72, Tamwe Gyi (Kha) Quarter, Thamainbayan Road, Tamwe.
Job Function: IT Manager/ Technician
•	Sound knowledge on organizational change and development. •	Knowledge in HR software would be an advantage.
•	မူးယစ်ဆေးဝါး နှင့်အသောက်အစား ကင်းရှင်းသူ ...
•	IT နှင့် ပတ်သက်သည့် System and Net-working ပိုင်းကို ကျွမ် ...
•	M & E လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သတ်၍ လုပ်ငန်း အခြေခံ� ...
•	တာဝန်ချိန်ကို အဆိုင်းဖြင့် အလှည့်ကျ တာဝန� ...
•	ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများကို သိကျွမ်းနာ� ...
•	Purchasing Policies ကိုသိကျွမ်းနားလည်ပြီး စီမံခန့်ခွ� ...
•	Purchasing data များကို ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းနိုင်ပြ ...